भयवाद अध्ययन केन्द्रले सार्क कल्चरल सोसाइटी नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईंलाई यो वर्षको ‘भयवाद तिलमती पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ । विराटनगरस्थित नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यालयमा आइतबार आयोजित समारोहमा भयवाद अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष प्राडा. टंक न्यौपानेले १५ हजार राशि रहेको पुरस्कार प्रदान गरे ।
साहित्य संगम चितवनले यस वर्षको मदनमोहन जोशी पुरस्कार साहित्यकार नमुना शर्मालाई प्रदान गरेको छ । साहित्य संगमका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मदनमोहन जोशीको नाममा स्थापित उक्त पुरस्कार शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदान गरिएको हो ।
सिस्नोपानी नेपाल र साहित्य संगम मकवानपुरले हास्यव्यंग्यकार भैरव अर्यालको स्मृतिमा स्थापना गरेको भैरव अर्याल स्मृति पुरस्कार धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई प्रदान गर्ने भएको छ ।
लाइभ पर्फमेन्समा गायक मनोजराजलाई सुन्नुजति आनन्द सायदै अरू हुन्छ । गजलका पारखीहरूले मंगलबार पनि यस्तै अनुभूति गर्न पाएका छन् ।
नेपाली लोकबाजा संग्रहालय र सांस्कृतिक संस्थानले बुधबारदेखि जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय लोक संगीत फिल्म फेस्टिभल गर्दै छन् । ‘जीवनका लागि संगीत र बाँच्नका लागि संगीत’ सन्देशसहित चार दिनसम्म चल्ने फेस्टिभलमा लोकसंगीत र जीवनशैली सम्बन्धित १७ देशका ३२ फिल्म देखाइने बताइएको छ ।
लामो समयदेखि फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित वरिष्ठ साहित्यकार डा. कविताराम श्रेष्ठको ७० वर्षको उमेरमा आइतबार बिहान लन्डनमा निधन भएको छ । उनलाई शनिबार चिन्ताजनक अवस्थामा लन्डनस्थित वकिङको सेन्ट पिटरमा हस्पिटल भर्ना गरिएको थियो । श्रेष्ठ सन् २००८ देखि सपरिवार बेलायतको वकिङमा बस्दै आएका थिए ।
एकल वाचनमा हेमन्त
डोट्याली कवि हेमन्त विवश शनिबार धनगढीमा सुनिएका छन् । एकल वाचनमा उनले छन्द र गद्यका दुई दर्जन कविता सुनाए ।
सुलेमान शंकर ‘ईकु’ को प्रस्तुति रहेको फिल्म ‘फिर्के’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘चट्टै...’ बोलको उक्त गीतमा सुलेमान आफैं नवनायिका कृष्टिना पौडेलसँग नाचेका छन् । रामचन्द्र काफ्ले र अञ्जु पन्तको युगल गायन रहेको गीतलाई सुवास भुसालले संगीत दिएका हुन् भने लेखु सहयात्रीले रचना गरेका हुन् । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको छ ।
दीपलाई संगीत रत्न
पाका गायक दीप श्रेष्ठको सांगीतिक योगदानको कदर गर्दै बिन्दवासिनी संगीत रत्न सम्मान २०७४ प्रदान गरिएको छ । शनिबार राजधानीमा विशेष कार्यक्रममाझ श्रेष्ठलाई ५० हजार रुपैयाँसहित संगीत रत्न सम्मान दिइएको हो ।
प्रज्ञामा दर्शन विमर्श
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राजधानीमा दर्शन सम्बद्ध विद्वान् एवं दर्शनप्रेमीहरूबीच विमर्श गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवसको अवसर पारेर नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको दर्शन विभाग र युनेस्को काठमाडौंले विमर्श गरेका हुन् ।
धनगढीमा सुनिए विवश
साहित्यमा सुदूरपश्चिमको जीवन बोकेर हिाडेका डोट्याली कवि हेमन्त विवशको शनिबार धनगढीमा एकल रचना वाचन आयोजना गरिएको छ । उनले छन्द र गद्यका दुई दर्जन कविता सुनाएर साहित्य प्रेमीको मन जिते ।
हामीमा नरेन्द्र र बिना
‘हामी कवि र कविता’ को ५१ औं शृंखलामा कविहरू नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र बिना थिङ प्रस्तुत भए । लुनकरणदास गंगादेवी साहित्य कला मन्दिर र सर्वनाम थिएटरले हरेक महिनाको पहिलो दिन गर्दै आएको शृंखलाको पहिलो चरणमा कवि श्रेष्ठ प्रस्तुत भए ।
टोटलाको फूल र सद्भाव कविता
कान्तिपुर संवाददाता , कार्तिक ३०, २०७४
कुनै बेला तामाङ सामुदायको सांस्कृतिक राजधानी मानिने तेमाल क्षेत्रबाट ल्याइएको टोटलाको फूल थालभरि सजाइएको ढोकाछेउ पुगेपछि प्राज्ञ डा. अमर गिरी अल्मलिए । ‘अब के गर्नुपर्छ ?’ काभ्रे साहित्य यात्राको दोस्रो दिन आयोजित कवि गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा उनले सोधे ।
पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितको आत्मकथा बजारमा आएको छ । मन्त्री भएको बेला आफ्ना अडान र कामहरूबाट चर्चामा आएका उनको आत्मकथा ‘सिंहदरबार बदल्ने सङ्घर्ष’ मंगलबारदेखि बजारमा आएको पब्लिकेसन नेपालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ‘मगर साहित्यमा मगरपन’ विषयक गोष्ठी गरेको छ । प्रतिष्ठानको मातृभाषा विभागले तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा– ७ अलैंचेस्थित होमस्टेमा साहित्यमा मगरपनमाथि छलफल चलाएको हो ।